Puntland iyo Galmudug Maxay ka wada hadleen ?
Wasiirka Caafimaadka Puntland Jaamac Faarax Xasan ayaa isna dhankiisa xusay in lama huraan ay tahay in la xoojiyo qorshaha wada shaqeynta bahda caafimaadka Puntland iyo Galmudug oo mudooyinkii u danbeysay ay ka muuqanayeen iskaashi wanaagsan.
Gunaanadkii labadda wasiir iyo mas’uuliyiinta ka socday qeybaha kala duwan ee Wasaaradahaasi ayaa si wadajir ah kormeer ballaaran ugu sameeyay qeybo ka mida isbitaalka weyn ee Gaalkacyo Galmudug iyo howlaha shaqo ee isbitaalku u bulshadu u hayo iyagoona warbixino la xariira xaaladaha bukaanada isbitaalka ku jira ka dhageysaty dhaqaatiirta iyo howladeenada caafimaadka.
« Isbahaysi cusub oo Looga dhawaaqay Somaliland.
Khilaafka ayaa ka dhaxeeya xisbiyada Wadajir iyo ileys [AKHRISO] »